Fitsidihana ny faritra Atsimon'I Madagasikara | Primature
Mahazoarivo, faha 13 febroary 2020 – Ny Distrikan’i Betroka, ao amin’ny Faritra Anôsy, no nanombohan’ny Praiministra Ntsay Christian sy ny mpikambana ao amin’ny governemanta notarihiny, ny fidinana ifotony tany amin’iny tapany Atsimon’ny Nosy iny, androany, hijerena akaiky ny sehatra rehetra mahakasika ny fiainam-bahoaka . Miara-dia aminy, ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny minisitry ny Fitsarana, ny minisitry ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana, ny minisitry ny Filaminam-bahoaka, ary ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena.
« Mpiasam-bahoaka ny mpiasam-panjakana, ny fanjakana dia vahoaka, ary ny vahoaka no maha fanjakana ny fanjakana ». Izay no fampahatsiahivana hentitra nataon’ny Praiminisitra raha nifanakalo hevitra tamin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny miasa any amin’ny Faritra Anôsy ny tenany, ary izany dia nohon’ny fahatsapana fa mbola miaina fahantrana ny vahoaka ankehitriny, nefa dia misy ireo tompon’andraikitra sy olom-boafidy no sahy manararaotra an’izany fahantrana izany hanatsarany ny fiainany manokana. Nambaran’ny Praiminisitra fa ny fisian’ny olana any amin’ny Faritra dia midika fa tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy ny mpiasam-panjakana ary tsy ampy ny fandraisana andraikitra. Notanisainy araka ny tatitra voarainy ny toe-javatra mbola miseho: ny kolikoly, ny fanararaotam-pahefana, ny famotsiana omby andraisan’ny delegem-panjakana anjara, ny firaisana tsikombakomba amin’ny mpanao asa ratsy, ny tandrevaka eo anivon’ny Fitsarana, ny Zandarimaria, ary ny Tafika, sy ny sehatra hafa ihany koa. Hametraka lalan-tsaina hanovana an’ireo rehetra ireo ny fitondram-panjakana, hoy ny Praiminisitra, dia lalan-tsaina mitondra ny fahitsiana , ny rariny, ary ny fahamendrehana eo amin’ny asam-panjakana mba tsy ho toy ny jiolahy izay sakana amin’ny fampandrosoana ny mpiasam-panjakana fa tena ho fanoitra sy andrin’izany fampandrosoana izany.
Io mbola tsy fahatomombanan’ny fanatanterahana ny asam-panjakana io no nentin’ny Praiminisitra nanazavana ny momba ny firongatry ny tsy fandriampahalemana. Tsy ekena, hoy izy, ny fiheverana fa ny fahantrana no mahatonga ny asan-dahalo. Noraisiny ho ohatra ny tranga fanafihana izay vao niseho tamin’ny lalam-pirenena faha-13, ka nambarany fa ny jiolahy nahavanona ny fanakanan-dalana dia Malagasy miaina ao anaty fiaraha-monina ihany. Izany hoe mila fanarenena ny fiaraha-monina, ary notsiahiviny teo ny hametrahana rafitra fanavaozana sy paikady araka ny toromarika avy amin’ny Filohan’ny Repoblika, ka ny fampanjakana ny fahamarinana hatrany no lalana hahatanterahana an’izany. Notsipihiny fa mandàla ny demokrasia ny firenentsika ka manana fahalalahana haneho hevitra sy hampahafantatra ny hetahetany ny vahoaka, ary ren’ny fitondram-panjakana avokoa ny zavatra mampitaraina ny vahoakany, indrindra ny resaka tsy fandriampahalemana. Araka izany, hoy izy, matoa tsy misy ny fandriampahalemana dia tsy misy intsony ny fifampitokisana eo amin’ny vahoaka sy izay natao hametraka izany fandriampahalemana izany, ka nohamafisiny fa tsy ny mpitandro ny filaminana ihany no miandraikitra ny fandriampahalemana, fa ny tomponandraikitra voalohany amin’izany dia ny lafintany : ny distrika sy ireo solotenanm-panjakana (OMC) ; ny faharoa dia ny tafika ; ary ny fahatelo dia ny Fitsarana. Ny fiaraha-miasa eo amin’ireo rehetra ireo ao anatin’ny fahamarinana, hoy ihany ny Praiminisitra, no hahafahana mamerina ny fandriampahalemana ary manafoana ny fisian’ireo tsy maty manota sy ny fivezivezen’ny olon-dratsy. Nomarihiny fa niteraka olana tamina toerana maro ity resaka tsy maty manota ity, toy ny tao Toliara 2, Beroroha, Sakaraha, ary Ambovombe ; ary nampahafantariny fa efa manao fanadihadiana ny kabinetrany, hijerena ny fomba hanatrarana ireo olona voakasik’izany, sy ny hamahana ny olana mikasika ny halatr’omby.
Anisan’ny mampaharary ny vahoaka ihany koa, hoy ny Praiminisitra, ny resaka tsy fanjarian-tsakafo sy ny mosary amina faritra maromaro eto Madagasikara. Iaraha-mahalala, hoy izy, fa mbola manafatra vary avy any ivelany ny firenentsika amin’izao fotoana izao. Nambarany fa miezaka hatrany ny fitondram-panjakana mitady vahaolana, ary tsy vitsy ireo hetsika fanarenana fotodrafitrasa efa natao, hahafahana mampiakatra ny voka-pambolena, hetsika izay efa natomboka tamin’ny taon-dasa. Nambarany ary fa haniraka ny minisitry ny Fambolena sy ny Tontolo Iainana hijery ifotony izay lemaka azo hajariana sy izay fotodrafitrasa tokony havaozina na hapetraka, ny tenany ; ary heverina, hoy izy, fa fotoana tokony hisokafantsika amin’ireo teknolojia vaovao ampiasaina amin’ny fambolena eran-tany, izao, mba hampiakatra ny vokatra azo eto an-toerana, indrindra ho an’ny fambolem-bary izany. Hojerena ihany koa, araka ny tenin’ny Praiminisitra ihany, ny lafiny fahasalamam-bahoaka. Efa nisy, hoy izy, ny hetsika nataon’ny fitondram-panjakana, ho fanoherana ireo valanaretina samihafa.
Nitondran’ny Praiminisitra fanazavana ihany koa ny resaka fambolen-kazo, izay lalan-tsaina vaovao napetraky ny Filohan’ny Repoblika ka ny isan-tokantrano mihitsy no tokony hampiseho fahavononana amin’izany satria tsy politika ny fambolen-kazo, hoy ny nambarany. Fantatsika, hoy ny Praiminisitra, fa tsy maintsy manapaka hazo ny vahoaka satria ilaina amin’ny fiainana andavanandro izany, ka izay indrindra no antony tsy maintsy hambolena hazo ary tsy maintsy hamoronana ala vaovao hitsinjovana fampandrosoana maharitra.
Teo am-pamaranana dia nanamafy ny Praiminisitra fa hiaro ny tombon-tsoan’ny vahoaka ny governemanta ankehitriny, ary maharary ny mpitondra fanjakana ny fahitana vahoaka mamoy aina nohon’ny tandrevaka ataon’ny mpiray tanindrazana hafa, ka handraisana ny fepetra tandrify izany.
← Conseil du gouvernement du Mercredi 12 février 2020
Ilaina ny fanovana ny toe-tsaina ho fampandrosoana ny firenena →